China Chill Dichroic Iridescent Window Film ho an'ny orinasa Glass na Acrylic sy mpanamboatra | Royal
Chill Dichroic Iridescent Window Film ho an'ny Glass na acrylic
Rainbow Iridescent Self Adhesive Window Film dia mameno ny habakao amin'ny loko tsy miova tsy tapaka ary hita amin'ny loko isan-karazany sy haavon'ny fampitana hazavana. Iridescent Glass Film dia manome fiainana manokana ihany koa amin'ny alàlan'ny fanakonana ny fahitana mivantana sy ny famelana hazavana tsara indrindra .. Niasa manokana tamin'ny sarimihetsika haingon-trano nandritra ny 15 taona mahery izahay, ny sarimihetsika fikandrana iridescent dia malaza amin'ny ankamaroan'ny tsena eropeana sy amerikana. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina.
Fampidirana ny vokatra an'ny Dichroic Iridescent Sarimihetsika Window
Adhesive Iridescent Window Film adhesive manokana dia mandray ny teknolojia famokarana mihodina, akaiky ny firafiny, mahafinaritra ny endriny. Ny Iridescent Window Films dia mifindra amin'ny avana miloko amin'ny fiovan'ny jiro na ny fihetsiketsehana. Rainbow Iridescent Window Film dia be mpampiasa amin'ny haingo avo lenta, varavarankely fivarotana, fampirantiana, haingon-trano.
• Ny voka-dratsin'ny fitaratra dichroic dia fiovana mahatalanjona amin'ny toerana rehetra, nefa koa afaka manampy vola be amin'ny tetikasa iray.
• Miaraka amin'ny horonantsary dichroic RG, ny vokany mamirapiratra mitovy dia azo tratrarina, amin'ny fiovan'ny loko amin'ny zoro isan-karazany, miampy fampiharana tsotra ary amin'ny ampahany amin'ny vidiny.
• Ny sarimihetsika RG dichroic dia afaka miseho amin'ny endrika hafa tanteraka, mamaritra ny habakao amin'ny fomba iray tena izy.
• Vita amin'ny akora premium, ny firakofana manjelanjelatra dia misy amin'ny endrika mafana sy mangatsiatsiaka.
Famaritana ny vokatra Dichroic Iridescent Sarimihetsika Window
Window Iridescent Film
50m, 100m (namboarina)
hateviny 70mic + 23micPET
70mic + 25micPET Loko miraikitra
sakany 1.38m Application
Varavarankely, velarana fitaratra
Mena, manga Karazan-doko
Mahatsikaiky ny tsindry
polyester Max. Faharetana
Product Mampiavaka ny Dichroic Iridescent Sarimihetsika Window
• Self Adhesive Iridescent Window Film miova eo anelanelan'ny feo mangatsiaka manga / magenta / mavo sy volamena / manga
• Sarimihetsika polyester polyester maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny fampiharana fitaratra anatiny
Product Application ny Dichroic Iridescent Sarimihetsika Window
Product Details ny Dichroic Iridescent Sarimihetsika Window
Fahafaham-pahaizana momba ny horonan-tsary Dichroic Iridescent Window Film
Fonosana sy fandefasana horonantsary Dichroic Iridescent Window
1, Ahoana no hahazoako ny santionany?
Azo alefa aminao ny santionany maimaimpoana aorian'ny nanamafisana ny antsipiriany rehetra, ary ny sarany mazava ihany no ilainao.
2, Ahoana ny amin'ny ora fandefasana?
Raha ny fitsipika ankapobeny dia maharitra 10-15 andro fiasana aorian'ny fandoavana.
3, Ahoana ny amin'ny teny nalaina?
Ao anatin'ny 24 ora aorian'ny nahazoanao ny fanontanianao, izay mifototra amin'ny antsipiriany rehetra tafiditra, toy ny habe, loko, habe, fangatahana manokana sns.
4. Ahoana no ahalalako fa afaka matoky ny filaminana aminao aho?
Nanomboka tamin'ny asa aman-draharaha nanomboka ny taona 2008 izahay ary manolo-tena hanana tolotra tsara indrindra.
5. Moa ianao afaka ny fanamboarana ny teti-dratsy, habe ary loko?
Azo antoka. Tena manampy izany raha manana hevitra mamirapiratra momba ireo entana tadiavinao ianao.
Previous: Famindrana hafanana mafana ho an'ny karatra sy taratasy
Manaraka: Taratasy famolavolana horonantsary mametaka ho an'ny vera na acrylic
Mamelombelona horonantsary Dichroic Window Adhesive
Sarimihetsika Dichroic Window Adhesive
0.2mm Iridescent TPU Film ho an'ny fanaovana kiraro, kitapo ...
0.4mm Dichroic Iridescent PVC sarimihetsika ho an'ny fanaovana ...
Blaze Dichroic Iridescent Window Film ho an'ny Glass ...
Red Pink Dichroic Iridescent Cellophane Film amin'ny ...
Holographic Metalized Lamination Film Hafa ...